Jamaahiirta Manchester United Oo HAL Ciyaartoy Ku Eedeeyey Guul-darradii Ay Xalay U Xambaarisay Wolves Iyo Laacib Kale Oo Ay Barbar-dhigeen – Latest Sports News
Jamaahiirta Manchester United Oo HAL Ciyaartoy Ku Eedeeyey Guul-darradii Ay Xalay U Xambaarisay Wolves Iyo Laacib Kale Oo Ay Barbar-dhigeen
Manchester United ayaa xalay si rasmi ah uga baxday tartanka FA Cup oo ay ku hamiyeysay inay semi-finalkiisa tagto, kaddib markii ay Wolves kusoo karbaashtay 2-1.
Kooxda tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa guul-darro xanuun badan kula kulantay shax uu ku sameeyey isbeddel oo uu fadhiisiyey qaar ka mid ah safkiisa koowaad, waxaanay taasi faa’iido u noqotay Wolves oo xiddigaheeda ugu awoodda badan safka hore kusoo bilowday.
Wolves oo xili ciyaareedkii hore ka timid heerka labaad ayaa sii wadda wacdaraha ay ka dhigayso dhamaan tartamada, waxaanay mar kale bannaanka dhigtay koox weyn iyadoo horena usoo karbaashtay naadiyada ugu tunka weyn ee horyaalka Premier League, taas oo siisay fursad ay kusoo fadhiisato booska kaalinta 7aad, kuna xigta Chelsea oo lixaad fadhida.
Kulankii xalay, tababare Solskjaer ayaa fadhiisiyey Romelu Lukaku iyo goolhaye David de Gea, waxaana jamaahiirtu ay aaminsan yihiin in haddii aanu tababaruhu go’aankaas qaateen ay natiijadu sidan ka duwanaan lahayd.
De Gea oo usbuucii u xaadira lacag dhan £240,000 muu ahayn goolhayaha tartanka FA u qabta Manchester United, waxaana iska lahaa Sergio Romero oo kayd u ah, balse xalay noqday dhibbanaha ay ku dhacday canaanta jamaahiirtu.
Taageereyaasha ayaa ku dooday in haddii uu goolka ku jiri lahaa David de Gea in aanay ka dhasheen labada gool ee Wolves ku shubtay shabaqii uu waardiyaha ka ahaa Sergio Romero.
“Haddii De Gea ciyaari lahaa, waxaanu ku guuleysan lahayn 1-0.” Sidaa waxa barta Twitterka kusoo qoray mid ka mid ah taageereyaasha Manchester United, waxaana kasii daba-qaatay mid kale oo soo qoray: “Dhamaanteen waxay tahay inaynu fikirkeena dhiibano. Aniga fikirkaygu waa in Romero uu yahay s*** iyo in Dea Gea uu labada goolba badbaadin lahaa.”
Taageere kale ayaa isaguna yidhi: “Waan qiimeeyaa Romero laakiin de Gea wuu badbaadin lahaa labada gool.”
Dhinaca kale, tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa ciyaarta kaddib ka hadlay mustaqbalka goolhaye David de Gea oo doonaya in mushaharka loo kordhiyo haddii kalena la fasaxo.
Solskjaer ayaa u sheegay De Gea in aanay jirin meel ka wanaagsan Manchester United oo nimco laga helayo, waxaanu xasuusiyey inuu joogo kooxda ugu wanaagsan.
“Ciyaartoyga ayay u taalaa laakiin marka aad joogto Manchester United, ma jirto meelo badan oo laga helayo doog ka qoyan ka halgan yaalla (ka lacag badan). Waxaad joogtaa meesha ugu wanaagsan. Waa kooxda ugu weyn caalamka. Aniga ahaan, waxaan rajaynayaa inaan caawiyo amaba ciyaaryahannada aanu la eegno waxa ay ka fikirayaan haddii ay doonayaan inay sii joogaan.” Ayuu yidhi tababare Solskjaer.
Tababare Ole oo hadalkiisa sii wata waxa uu kula taliyey De Gea inuu ka faa’iidaysto fursadda uu haysto ee ah inuu boos joogto ah ku leeyahay Manchester United, waxaanu yidhi: “Haddii aad ciyaartoy joogto ah ka tahay Manchester United, waxay ila tahay inaad ka faa’iidaysato fursadda aad halkan ku joogto oo aad qayb ka noqoto taariikhda kooxda.”
Manchester United make contact Juventus star